I-Liven: Bamba kwaye uzibandakanye nabo bonke abakhoyo kumsitho wakho olandelayo | Martech Zone
I-Liven: Bamba kwaye uzibandakanye nabo bonke abakhoyo kumsitho wakho olandelayo
NgeCawa, uDisemba 31, 2017 NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 Douglas Karr
Xa usisithethi, omnye wemiceli mngeni onayo kukuchonga ukuba ngubani owayekhona kwiseshoni yakho ukuze ukwazi ukulandela emva koko. Kubazimasi, kuhlala kuphazamisa ukuba awukwazi ukulandela umboniso ekuhlaleni. Izithethi zihlala zinika idilesi ye-imeyile apho abantu abanokubathumela nge-imeyile kwaye bacele indawo yesilayidi. Ingxaki kukuba kuhlala kusemva kwexesha kakhulu. Abazimeleyo bayashiya, balibale idilesi ye-imeyile, kwaye awukwazi ukunxibelelana emva kwenkomfa.
Iyaphila sisicelo esiphathwayo esisewebhu esitshintsha konke oku.
Abezongena ngenisa ikhowudi yomsitho
Jonga i-Ajenda yeNkomfa
Jonga iNgcaciso uze uzibandakanye noSomlomo
Kutshanje ndisebenzise iqonga kumsitho endiwubambeyo kwingingqi. Umnyhadala wawusimahla kwaye uvulelekile eluntwini, kodwa kwakubalulekile ukuba ndifumane ulwazi loqhakamshelwano lwabo babekho ukuze ndikwazi ukunxibelelana nabo kwiminyhadala ezayo. Kananjalo, sasinepaneli evulekileyo ye-Q & A kumsitho, kwaye sasifuna ukubonelela ngendlela elula kwabo babekho ukuba babuze imibuzo.
kunye Iyaphila, Sibonelele nge-ajenda yethu kunye nenkcazo yePowerpoint. I-Liven iqulunqe ikhowudi yomsitho kwaye yapapasha izilayidi zethu. Eyona nto ilunge kakhulu, khange sisebenzise i-Keynote okanye i-PowerPoint; Sichaze nje isikhombisi esikhulu kwisiboniso somsitho. Njengombonisi, singaziqhubela phambili izilayidi zethu ekuhlaleni xa singene eqongeni… konke nge-Intanethi. Isebenze ngokugqibeleleyo. Njengesithethi, sasixelelwa nakwiphepha lethu xa kubuzwa umbuzo! Iqonga likwabonelela ngovavanyo olulandelayo lwabazimasi.
Ngokuyigcina sisicelo sewebhu esiphathwayo, bekungekho khuphela okanye kukho ukudideka-ndacela nje wonke umntu ukuba akhuphe i-smartphone yabo, bavule isikhangeli ku-Liven.io, kwaye bafake ikhowudi yomsitho. Akukho mntu wayenomcimbi wokubhalisa kunye nokwazisa umsitho. Eyona nto ibaluleke kakhulu, saphuma kulo msitho kunye neenkcukacha zonxibelelwano zabo bonke ababekho. Ngoku, xa sicwangcisa umsitho wethu olandelayo, sinoluhlu lwethu lwe-imeyile ukuthumela isikhumbuzi nathi!
U-Liven sisiqalo kwaye umseki, uMike Young, uxhaswe liqela elimangalisayo UmPhuhlisi weTown. Bahamba ngokukhawuleza ngotshintsho kwaye bamilisela amanqaku amatsha rhoqo ngenyanga. Unokwenza umsitho wakho wokuqala ngoku kwaye uthathe iqonga lokuqhuba ukuqhuba! Ukuba ungathanda ukubonisa iqonga ngoku, faka ikhowudi TST.
Yenza uMnyhadala woMnyhadala
tags: abadibeneyoukufaka ubhalisoizixhobo zenkomfaisiganekoirejista yomsithoubhaliso lomsithoiselfowuniintetho ephathekayousetyenziso lwewebhu leselula
Ividiyo: Yenza iiVidiyo zoopopayi kwi-Intanethi